Hadda Waa 11 Kulan Iyo 12 Koob! Goolhayihii Taariikhda Kubbada Cagta Ugu Guulaha Badnaa Iyo Xusuusta Dareenkii Uu Bixiyay Oo Cajiib Ah. - GOOL24.NET
Hadda Waa 11 Kulan Iyo 12 Koob! Goolhayihii Taariikhda Kubbada Cagta Ugu Guulaha Badnaa Iyo Xusuusta Dareenkii Uu Bixiyay Oo Cajiib Ah.
Kubbada cagtu waa mihnad waxyaabo badan oo layaableh looga soo joogay isla markaana ay maalin kasta ka dhacaan waxaana jira ciyaartoy waqtiyo badan ku soo dhex jiray kubbada cagta oo ka fadhiista iyaga oo aan hal koob ku guulaysan halka kuwo kale ay ku guulaystaan koobab xataa ka badan tirada da’doodu tahay.
Laakiin waxaa jira hal goolhaye oo lagu tilmaamo goolhayaha kubbada cagta ugu guulaha badan marka loo tixgaliyo kulamadii uu ciyaaray waana sheeko cajiib ah oo ku saabsan sida goolhaye uu 12 koob ugu guulaystay kadib markii uu 11 kulan oo kaliya uu ciyaaray.
Goolhayihii hore ee reer Portugal ee Paulo Lopes ayaa ah goolhayaha 12 koob ku soo guulaystay kadib markii uu ciyaaray 11 kulan oo kaliya isaga oo bishii July ciyaaraha ka fadhiista kadib markii gaadhay da’da 21 sano jir kaliya.
Paulo Lopes ayaa muddo 14 xili ciyaareed ah ku soo qaatay kooxda Benfica laakiin waxa uu waqti badan soo ahaa goolhayaha doorashada labaad taas oo xadiday kulamadii uu safan lahaa balse waxa uu markasta ahaa mid koobab ku soo guulaysanayay isaga oo kaydka fadhiya.
Paulo Lopes oo la hadlayay BBC isla markaana saxaya haddii ay run yihiin xogta layaabka leh ee waayihiisa ciyaareed la xidhiidhaa ayuu ku jawaabay: “Haa waa sax, waxaan anigu u dhashay in aan guulaysto”.
Marka laga hadlayo shaqadii goolhaye Paulo Lopes ee booska labaad ee goolhaye waxay xusuusteedu keenaysaa Robert Green oo Chelsea si lama filaan ah goolhayaha labaad ugu noqday, Richard Wright oo Manchester City ah, Lee Grant oo Manchester United booska goolhayah albaad ugu jira iyo waliba goolhayaha ayna ka dhamaan ee Stuart Taylor balse midkoodna ma gaadhi karo xogta layaabka leh ee Paulo Lopes.
Lopes oo ka hadlayay dareenkiisa xogta loo diwaan galiyay ayaa yidhi: “Farxad ayaan ka helaa tirooyinka waayahayga ciyaareed, waxay qayb ka yihiin guulahayga iyo sida ay muhiim iyo khaas u ahaa waayahayga ciyaareed”.
Paul Lopes ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Sharaf wayn ayaan dareemaa iyo qanacsanaan sababtoo ah marka aan koobabka iyo biladaha eego waxaan dareemaa in ay shaqo ahayd oo ugu badnaan ah shaqada kooxda laakiin waxay sidoo kale muujiyeen guulahyagi goolhayenimo”.
Lopes ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Benfica saftay sanadkii 2002 laakiin tobankii sanadood ee ku xigay waxa uu inta badan ku qaatay horyaalka heerka labaad ee Portugal balse markii uu 34 sano jir noqday sanadkii 2012 kii ayuu dib ugu soo laabtay Benfica.
Lopes oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waan filayay in ay kafbtan ahayd” kadib markii uu telefoon ka helay halayayay Portugal ee Rui Costa oo ahaa agaasimihii ciyaaraha ee Benfica.
Kadib Lopes ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Benfica saftay 8 October 2012 kii laakiin intii u dhexaysay 2017 kii waxa uu ku soo guulaystay 12 koob isaga oo xili ciyaareedkiisii ugu badnaa saftay 5 kulan kaas oo ahaa xili ciyaareedkii uu isaga oo 34 sano jir ah ku soo laabtay Benfica.Costa.
Lopes waxa uu ka mid ahaa kooxdii Benfica ee afarta koob ee xidhiidhka ah ee horyaalka Portugal ku soo guulaystay intii u dhexaysay 2014 kii ilaa 2017 kii wuxuuna waqtigan ku soo guulaystay 12 koob laakiin waxa uu kooxda kowaad u saftay xiligan 11 kulan oo kaliya.